तारे होटलमा रमिता देखाएर विद्यार्थीले के पाउंछन्
दिनेश के.सी. शिक्षा क्षेत्रमा हाल देखिइरहेको भद्रगोलको स्थिती को धेरै हिस्सा हाम्रा प्रिय राजनीतिमा माहिर शैक्षिक नीति शिल्पीहरुले लिनुपर्छ | समाज परिवर्तनको संवाहक शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थ...
महोत्सवका लागि विद्यालय बन्द !
Kapil Anjan यो कस्तो सभ्यताको श्रङ्खला हो ?महोत्सवका लागि विद्यालय बन्द ! हिजो गुलरिया नगरपालिका वरिपरिका विद्यालयहरु बन्द गरियो । भोलि कोहलपुर वरिपरिका विद्यालयहरु बन्द गर्ने कुरा सुनिदैं छ । ज...
पढाउने कुरामा परिवेशलाई ध्यान दिनु जरुरी
Lokendra Ghatal भन्नलाई सजिलो छ फकाएर र मनोवैज्ञानिक तरिकाले पढाउनुपर्छ र जस्तोसुकै गल्ती गरेपनि पिट्नु त के छुनु पनि हुदैन, फकाएर सुधार्नुपर्छ भनेर । सकेसम्म फकाएरै पढाउनुपर्छ । तर सबै स्थान, समय र प...
मन्त्री पनि शिक्षकनै !
राकेश सुकुपायो शिक्षकहरूको समस्या निजामती कर्मचारीले बुझ्दैनन् । त्यसैले जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु शिक्षकहरु नै हुनुपर्छ । जि शि अ देखि मन्त्री सम्म शिक्षकहरु नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो